किन डराउछन् विप्लवसंग प्रचण्ड ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
किन डराउछन् विप्लवसंग प्रचण्ड ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालिन सहयात्री नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसंग डराएका छन् । उनी कि डराए ? के थियो प्रचण्डको गल्ति ? यस्तै कुराहरुको अहिले खुब चर्चा हुने गरेको छ ।
हरेकले प्रचण्ड डराउनुको रहस्य के हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् । सरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी नेकपाप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भपछि विप्लवले पनि सरकारलाई तर्साएका छन् । नेकपा अध्यक्ष दाहाल त झन आफुलाई विप्लवले मार्ने सुचीमा राखेको भन्दै देश छाडेर फरार समेत बनेका छन् ।
प्रचण्डले आफ्नी पत्नी सिता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका जान लागेको बताएपनि उनी डराएर भागेको आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ । विप्लव र प्रचण्डको सुरुवाति दुस्मति सत्तामा रहँदा सत्ता साझेदारी पार्टि नेतृत्वको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सुरु भएको हो । विप्लव अहिले पनि त्यहि अहंकारले बम आतंक मच्चाई रहेका छन् । विप्लवका पछिल्ला गतिविधिले जनताहरु त्रसित बनेको अवस्था छ ।
बम काण्डलाई एकथरीले आतंक भनिरहेका छन् । तर, विप्लवलाई नियन्त्रणमा लिने कुरामा भने सरकार मौन रहेको छ । यिवप्लवे अहिले सुरुमा चन्दा माग्ने, नदिएपछि बम विष्फोट गराउन हर्कतहरु ग्र्दै आएको छ । विप्लवको यो कार्यशैली धेरैलाई चित्त बुझेको छैन ।